သူ …ကျွန်မတို့ ချစ်သော…. | theworldasiseeit
Posted by: zawmyohtet123 | January 26, 2011
သူ …ကျွန်မတို့ ချစ်သော….
စာသင်ခန်း ပူအုံအိုက်အတွင်းမှာ စိတ်မပါ့တပါ ၀င်ထိုက်ကာ အတန်းရှေ့က ဆရာတစ်ယောက်၏ နှုတ်မှ ကျွန်မတို့ သေသေချာချာ အဓိပါယ်နားမလည်သော ၊ မျက်စိထဲမြင်ယောင်ကြည့်ရန်ခဲခက်သော စာတွေကို ရပ်တန့်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ ခရားရေလွတ်တစ်တွတ်တွတ် အန်ထုတ်လိုက်သည့်စကားလုံးတွေနောက် ရသမျှ ကို အပြေးအလွှား အမောတကော လိုက်ကောက်ယူ စုဆောင်း မှတ်သား သိုမှီး ရင်း အချိန် တစ်နာမှ နောက်တစ်နာရီ ကုန်ဆုံးစေကာ ကျောင်းဆင်းမှ ခေါင်းက အုံခဲခဲကျန်ရစ်ကာ ဘာမှ မသိတော့တာမျိုး ဖြစ်ရ ၊ စိတ်ညစ်ရသည် တို့ကို တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသူ ကျွန်မ ကောင်းကောင်းကြီးမြည်းခွင့်ရလေပြီ ။ ကျွန်မတို့ကျောင်းက မိန်းကလေးအများစု တက်ရောက်သည့် သူနာပြုတက္ကသိုလ် ၊မန္တလေး ။
စာတွေက များရ ၊ ရှုပ်ထွေးရသည့်အထဲ သင်သည့်ဆရာက စာတွေချည်းပြောပြသွားသောအခါ ကျွန်မ၏ မျက်တောင်တွေသည် စင်းကနဲ ၊ လက်ချာမှ မဆုံးသေးခင် နဖူးပြင် နှင့် စာရေးခုံ သည် ”ဒုံး ” ခနဲ ။ လူလည်း အိပ်ပျော်တစ်ဝက်မှ ဆတ်ခနဲ လန့်နိုး ။ မိမိအဖြစ်ကို ဘေးမှ ၊ နောက်မှ သူငယ်ချင်းတွေ မြင်တွေ့သွားမှာ ဆိုး သည်ကြောင့်လည်း မသိမသာ စောင်းငဲ့ရင်း အရှက်ပြေ ပြုံးပြ ရ။ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပြန်ပြင်ရင်း ၊ ခါးကိုမတ် ၊ အောက်ဘက်ကို ပြေလျော့ကျနေသည့် ဆံစ ကို သပ်တင်ကာ အတန်းရှေ့ white board ကြီးပေါ်မှာ Marker pen နဲ့ ရေးချထားသည့် ( ကျွန်မ သတိလွတ်သွား၍ နားမလည်လိုက်တော့သည့် ) စာများ၊ equations များ ၊ formula များ ၊ ကျွန်မမရင်းနီးသေးသည့် latin စကားလုံးများ ကိုမြင်ရ ၊ ထို့ပြင် မိုက်ကြီးကို ဟန်ပါပါ ခဲထားသောလည်း အနိမ့်အမြင့် အလျော့အတိုး မရှိသည့် အသံဖြင့် (mono tone ဖြင့်) စာ သင်နေသော အသံကိုကြားရပြန်တော့ အရှက် ကို မငဲ့ နိုင် ၊ အကြောက်နှင့် အားနာမှုအလျင်းမရှိတော့ဘဲ မျက်တောင် က တစ်ဖန် ပြန်၍ စင်း ခနဲ…။
ထိုဘာသာရပ်တွေက english လို သင်ရ၍ နားလည်ရန်မလွယ်သဖြင့် ပျင်းစရာကောင်းသွားတာကို ထားအုံး ။ မြန်မာလို သင်ရ ဖတ်ရသည့် မြန်မာစာကိုပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် မသင်ပြတတ်ပါက အင်မတန် ငြီးငွေ့စရာကောင်းသွားတတ်သေးသည်မဟုတ်လော ။ ဆရာနှင့် တပည့် အဆက်အဆံ အသွားအပြန်နည်းလှသော စာသင်ကြားနည်း (one way teaching ) ကြောင့် ပို၍ ငြီးငွေ့စရာကောင်းသွားဟန်တူသည် ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ထိုသို့ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ် ။ ကျွန်မ နှင့် အတူထိုင်သည့် အတန်းဖော်တွေလည်း ထို့နည်း လည်းကောင်း ။
ထိုပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည့် စာသင်ကြားမှု ပုံစံကို အလဲထိုးချပစ်သည့် ဆရာကြီးတစ်ယောက် (ကံကောင်းထောက်မစွာ) ကျွန်မတို့ ကြုံခဲ့ရလေသည် ။ သူ ကား မြန်မာစာ သင်ကြားပေးသော မြန်မာစာကထိက ဌာနမှူး ဆရာကြီး ဦးစိန်ဝင်း ။
ဆရာကြီးက အသက် 5၀ အရွယ် ၊ လူလုံး လူဖန်ခပ်သေးသေး ပါးပါး ပု ပု ။ အသားညိုတာထက် မည်းသည့် ဘက်ကို ပိုသန်းသည်ထင်ပါသည်။ မည်းပေမဲ့ချော့ကလက်ဖြစ်ကြောင်း နောင်တွင်တွေ့ရလေသည် ။ ဆရာကြီးသည် ကထိကဌာနမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ကထိကကြီးတစ်ယောက်လို ဟိတ်မရှိ ဟန်မရှိ ။ အသက် 50 အရွယ်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်မတို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း ။ ရုပ်ရည်သန့်သန့်ပြန့်ပြန်မဟုတ်သော်လည်း ဆရာ့မျက်နှုာသည် အမြဲကြည်ညိုစရာ ။ မြန်မာစာဌာန နှင့် အခြားသော ဌာန ရှိဆရာ ၊ဆရာမများ အချို့ထက် အသက်အ ရွယ်ကြီး သော ၊ ထို့ပြင် မြန်မာစာဌာနတွင် ရာထူးအကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း လက်အောက်ငယ်သား ဆရာများလောက်ပင် ကြောက်စရာ မလို ၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး သည့် ဆရာ ။ ရိုးသာသော၊ စေတနာထားသော အရိပ်အယောင်များ မျက်နှာ ညိုမည်းမည်းပေါ်တွင် အထင်းသား ပေါ်လွင်နေသည့် ဆရာ ။ စာသင် အင်မတန်ကောင်းသည့် ဆရာ ။ ငွေကြေးမပြည့်စုံသော်လည်းဆရာကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းတွေသူ့မှာ အပြည့် နှင့် ဆရာ ။
ကျွန်မမှတ်မိပါသေးသည် ။ ပထမဆုံးစာသင်ရက်က ဆရာက စာသင်ခန်းတွင်းကို ခပ်အေးအေးလူလူပင် ၀င်လာသည် ။ ကျွန်မတို့ကလည်း မြန်မာစာ ဌာနမှူးစာလာသင်မည် သတင်းကြားကတည်းက အနေကခပ်ကြုံ့ကြုံ့ ဖြစ်ချင်နေပြီ ။ မလှုပ်ရဲ ၊ အသံမထွက်ရဲ ။ သူ့လက်ထဲကိုင်လာတာက ဖတ်လက်စ မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ် ၊ ရောက်သည့်နေရာကို လက်ညှိုးရှို ထားသည်။ စာသင်ခန်းတွင်းရောက်လျှင်ရောက်ချင်း stage ပေါ်ရှိ စားပွဲပေါ် တစ်စောင်းလွှဲထိုင်လိုက်သည် ။ ( ထိုင်ရန် ထိုင်ခုံပေးထားပါလျက်နှင့် ) ။ ဘေးတွင် ချပေးထားသည့် မိုက်ကရိုဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ကာ မိမိကိုယ်မိမိ မိတ်ဆတ်ပေးသည် ။ ဆဏတွင်းချင်းမှာပင် ဆရာ ကြိးနှင့် ကျွန်မတို့ ရင်ဘက်ချင်း ဂျပ်ပင်ထိုး မိကြပြီ ။ ခဏလေးမှာပင် ကျွန်မတို့ တင်းနေ ကြပ်နေသည့်စိတ်တွေ က ပြေလျော့ကျကုန်သည် ။ လှုပ်ရဲ လျားရဲ ၊ ဖြစ်လာသည် ။ ဆရာက သူတစ်ယောက်တည်း မပြော ။ ကျွန်မတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ပါ အပြန်အလှန်ပြောခွင့်ပေးသည် ။ အချိန်တစ်နာရီပြီးတစ်နာရီ ဆရာမတွေ ပြောတာကိုပဲနားထောင်လာရသည့် ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေ ၊ စကားမပြောရရင် လေဖြတ်တော့မတတ် ၊ ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်တတ်သည့် ကျွန်မတို့တွေ အဖို့ စိတ်ထွက်ပေါက်ရလေပြီ ။ စာသင်ပထမနေ့က ဖွင့်ထားလက်စ မြန်မာစာ ပြဌာန်းစာအုပ် ကို မထိလိုက်ရပါခြေ ။ ကျွန်မတို့ ကို စာရွက်ထဲမှာ မိမိအကြောင်း နှင့် အနှစ်သက်ဆုံးစာရေးဆရာ ၊ ဖတ်ခဲ့ဖူးသော စာအုပ်အရေအတွက်၊ ထိုထဲကမှ မိမိအကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုအမည် နှင့် ထို ၀တ္ထု၏ အကျဉ်း နှင့် ဘာကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရသည်ကိုပါ ရေးခိုင်းသည် ။ ဆရာ့လက်ချာချိန်သာကျော်လွန်သွားသည် ။ ကျွန်မတို့ပျင်းရိငြီးငွေ့ချိန်မရလိုက် ။ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရသော interactive learning ပုံစံကို လက်တွေ့ ပြသသွားလေသည် ။
နောက်နေ့တွေ မြန်မာစာသင်ချိန် ဆရာကြီးဝင်ရတိုင်း ( တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာငယ်တွေလာသင်ခိုင်းသည်) stage ပေါ်ရှိ စားပွဲပေါ် တင်ပလ္လင်ခွေပြီးထိုင်ကာ ”ကိုင်းငါ့တပည့်တို့ စလိုက်ကြရအောင် ” အစချီကာ သူဖတ်ခဲ့ရသည့် စာတစ်အုပ်ထဲမှ (စာတိုထဲမှ ဖြစ်စေ ၊ ၀တ္ထု ထဲမှဖြစ်စေ)အရေးအသားကောင်းမွန်ပုံ ၊ ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်း ၊ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ဇာတ်ကောင်၏ စရိုက် တွေကို ပါ ထုတ်နှုတ်ပြောပြသွားသည် ။ ဆရာက အပြောလည်းကောင်း တော့ ကျွန်မတို့ အာရုံက သူ့ပေါ်မှာ ပြုံကျနေသည် ။ အရွှန်းလည်းဖောက်သည် ။ ကျွန်မတို့ ”၀ါးခနဲ” အားရပါးရရယ်ကြရသည် ။ ”ဟေး ”ခနဲ အော်ကြဟစ်ကြသည် ။ ဆရာရဲ့ ၀တ္ထုဇာတ်ကြောင်းလည်းပြီးသွားသည့်အခါ ……
” ကိုင်း ခုနက ဆရာ ပြောပြသွားသလိုပဲ မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်ထဲက စကားပြေတစ်ပုဒ်လောက်ကို ဖတ်ပြီး ဇာတ်ကောင်တွေ အကြောင်း နဲ့ စရိုက်သဘာဝ ၊ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဖတ်ပြီး ထုတ်ကြည့်ပါ ။ မင်းတို့အကုန်လုံး မြန်မာတွေချည်းမဟုတ်လား …ဟဲဟဲ” ။ ဆိုပြီး သူ့လက်ချာကိုသိမ်းလေသည် ။
ဆရာက စာဖတ်နာသည့် စာသမားဖြစ်သည့်အလျောက် ဗဟုသတ အထူးပြည့်စုံသည် ။ ကြုံရင်ကြုံသလို စာရေးဆရာကြီးများ အကြောင်းကို ပြောပြတတ်သည် ။ အားကျအတုယူဖွယ် စရိုက် နှင့် အမှုအကျင့်ကောင်းများကို လက်ညှိုးထိုးထောက်ပြသည် ။ ရယ်စရာ ဘ၀အမောပြေစရာများလည်း ပါသည် ။ ၀မ်းနည်းစရာ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာလည်းပါသည် ။ သာဓုဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုး ၊ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းကတော့ ဘယ့်နှယ်၊ ငွေတာရီ ၊ ဥိးဖေမောင်တင် ၊ ဒဂုန်တာရာ ၊ ဆရာတင်မိုး ၊ နေ၀င်းမြင့် တို့ အကြောင်း သုတ ရဖွယ် အတုယူဖွယ် ပြောပြတော့ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်တွေကို နားထောင်နေရသလို ။ ဖတ်သင့် ဖတ်ထိုက် သည့် စာအုပ်များကို လည်း ညွှန်ပြပေးသည် ။ (ထိုစဉ်က စာအုပ်ထဲလိုက်မှတ်သားထားသော်လည်း ခု ချိန်ပြန်ရှာဖတ်မယ်လုပ်တော့ မတွေ့တော့ပြီ) ။ ဆရာကြီး၏ အဟောအပြော အသင်အပြ လမ်းညွှန်ကောင်းမှုတို့ကြောင့် ကျွန်မသည် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ထဲမှ စာအုပ်အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ ။ အရသာခံတတ်ခဲ့ရသည် ။
ဆရာကြီးသင်ရမည့်အချိန်ဆို လျင် ကျွန်မတို့ အလိုလို ပျော်နေတတ်သည် ။ ဆရာကြိး စာသင်ခန်းအတွင်းဝင်အလာကို မျော် နေတတ်သည် ။ ဘာကြောင့်နည်း ။ ဆရာက တခြားသော ဆရာတွေလိုမဟုတ် ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် မထား ။ သူ့  သင်ပြနည်းကလည်း သူများတွေလို မဟုတ် ၊ တမူထူးသည် ။ တခြားသောဆရာတွေက စာသင်ချိန်တွင် ကျွန်မတို့ကို ငြိမ်နားထောင်၊ စကားမပြောနဲ့ တားမြစ်သလောက် ဆရာက ကျွန်မတို့ကို စကားပြောခွင့် လွတ်လပ်စွာတွေးတောခွင့် ငြင်းခွင့် ပေးထားသည်။ ဆရာကစကားတစ်ခွန်း ပြော၍ ငြင်းစရာရှိပါက ချက်ချင်းလက်ထောင်ကာ အော်ကြဟစ်ကြလို့ရသည် ။ ဟုတ်သွားပါကလည်း ဟေးခနဲ တညီတညာ အော်ကြသည် က ပျော်စရာ ။ အတန်း၏မည်သည့် နေရာမှ တပည့်ကျောင်းသားမဆို ဆရာကြီးကို လက်ထောင်ကာ လှမ်းမပြောဝံ့သူမရှိ ။ဆရာနှင့်တပည့်အကြား အကြောက်တရား သုည ။ အဆင့်အတန်း ကွာခြားချက်မထား ။အကြောက်တရား မလွှမ်းမိုးသော စာသင်ကြားမှုသည် ဥာဏ်ကွန့်မြူးလေသည်။ အတွေးတွေ ဆန့် ထုတ်နို်င်လေသည် ။ ဆရာ့ကို မကြောက်ကြသော်လည်း ချစ်ကြသည်။ ရိုသေလေးစားကြသည်။
ဆရာက တက္ကသိုလ် ရောက်နေသည့် ကျွန်မတို့အရွယ် တွေကို ကလေးလို့ မြင်သည့် အတွက် အကြီးတစ်ယောက်က ကလေးတစ်ယောက်ကို စ သလို မျိုး ကျီစားသည့်အခါလည်း ရှိသည် ။ ကျွန်မတို့အတန်းတွင် ”မောင်မောရှေ” ဟု ခေါ်သည့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါသည် ။ ဆရာကြိးက roll call ခေါ်တိုင်း ထိုနာမည်ကို ” မောင် မော ရှေ ” ဟုခေါ်ရမည့်အစား ” မောင်မောင်ရှေ” ဟု တမင်လွဲ၍ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဒါကို ကျောင်းသား က မှတ်သားထားဟန်တူသည် ။ welcome ceremonyေ၇ာက်တော့ တစ်ယောက်ချင်း စင်မြင့်ပေါ်တက်၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိတ်ဆက်ကြရသည်။ ထိုကျောင်းသားအလှည့် ရောက်တော့ ကျွန်တော့်နာမည်က ” မောင်မောရှေ ” ပါ။ ဒါကို တစ်ခ်ျို့ မသိနားမလည်တဲ့ သူတွေက တော့ ”မောင်မောင်ရှေ ” လို့ လွဲမှားစွာ ခေါ်ကြကြောင်း ပြန်ပြောတော့ ရှေ့ဆုံးအတန်းမှာ အခြားသော ဆရာ ဆရာမများနှင့်အတူ ထိုင်နေသော ဆရာကြီးက မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲ ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်လေသည် ။ စိတ်ထင့်ခြင်း စိတ်ဆိုးခြင်း မရှိ၊ မာန်မာန အလျဉ်းမရှိသည့် ဆရာကြီးပေတည်း ။
ဆရာကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်စရာ ကောင်းပုံ အမှတ်တရ တစ်ခုလည်းရှိသေးသည် ။ တစ်ခါတုန်းက ကျောင်းသူတစ်ယောက်က နေ့ခင်း2နာရီလောက် ကြီး ရှေ့လက်ချာအပြီး နောက်လက်ချာတစ်ခု မလာခင်စပ်ကြား လစ်ထွက်လာသည် ။ နေကလည်း ချစ်ချစ်တောက်ပူနေသည် ။ နေပူရသည့်အထဲ ထီးလည်း ပါမလာ ။ (ပါလာလည်း ထီးထုတ်ဆောင်းလို့မဖြစ်၊ ဆရာတွေတွေ့သွားမှဖြင့် ) ။ ကျောင်းတောင်ဘက်လမ်းကြားအတိုင်း ဆရာတွေ မမြင် မတွေ့ နိုင်အောင် ခပ်သုတ်သုတ် လေး လစ်ထွက်လာသည့် သုတ်သုတ်ပြာပြာ တပည့် မလေးတစ်ယောက် …။ မတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုမှ ချိန်းထားသလားအောက်မေ့ရလောက်အောင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပင် ဆရာတစ်ယောက် နှင့် ပက်ပင်းဝင်တိုးလေပြီ။ ဟိုးရှေ့ က မီးခိုးလုံး အူနေအောင်ထွက်သည့် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တထုတ်ထုတ် ခုတ်မောင်းလာသည်ကား တခြားမဟုတ် နိုင် ၊ မြန်မာစာကထိကဌာနမှူး ဆရာကြီး ဦးစိန်ဝင်းပင်ဖြစ်ရမည် ။ စိတ်ထဲ ဗလောင်ဗလဲ သူခိုးလူမိ ကြံရာမရ ဖြစ်နေခိုက် ဆရာကြီးက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပင် ။
” ဟဲ့ မိ……(ဆရာကြီးက ကျွန်မတို့အားလုံးကိုသိသည်) ဒါက ဘယ်သွားမှာတုန်း၊ ကျောင်းချိန်ကြီးလေ ။ လက်ချာရှိတယ်မလား ။ ဘယ်လစ်တာတုန်း ” ဆိုပြီး ပြုံးစိပြုံးစိနှင့် မေးတော့
” ဟုတ်ဆရာ လက်ချာရှိတယ်။ နောက်တစ်ချိန်ဆက်မတက်ချင်တော့လို့ ဆရာတွေမသိအောင် လစ်ထွက်လာတာ ဟီး ” ဟုသာ ဇတ်ကလေး ပုပြီး မျက်နှာချိုသွေးရတော့သည် ။
” ခုဘယ်ပြန်မှာတုန်း ”
” အဆောင်ပြန်မှာ ဆရာ”
”ဘယ်နှယ် နေပူကြီးထဲမှာ ထီးလဲမပါ ၊ ညည်းအဆောင်က ဘယ်နားမှာလဲ ”
”ဟိုး လေးပြ ငါးပြလောက် လျှောက်ရင်ရောက်တယ်ဆရာ”
”ကိုင်းကိုင်း ဒါဆိုလည်း ဆရာ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက် ” ဆိုပြီး နေပူခေါင်ခေါင်ကြီးမှာ ထီးမပါ ဘဲ အဆောင်ကို ပြန်လစ်ပြေးတဲ့ သူ့တပည့် ကို အဆောင်ပေါက်ရောက်သည် အထိ သူ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်လိုက်ပို့ပေးသည့်ှဆရာ ။
ဆရာကြီးသည် သူ့တပည့်တွေနှင့် သည်မျှ လောက် သင့်တင့်သည် ။ တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာ ဆိုသည့်အတိုင်း ဆရာကြိးဆိုသည့် ဂုဏ်ကို ရှေ့တန်းမတင်သောဆရာကြီး ၊ တပည့်တွေကို သားသမီးသဖွယ် ဂရုစိုက်သောဆရာကြီးကို ကျွန်မအပါအ၀င် ကျောင်းသားတပည့်တိုင်းက ချစ်ခင်ကြသည် ။
” မင်းတို့ အတန်းမှန်မှန်တက်ရမယ်။ roll call အရေးကြိးတယ်” ဟု တစ်ခါမှ မပြောသော်လည်း သူ့ လက်ချာသည် အမြဲတန်းလူပြည့်သည် ။
ထို့ပြင် ဆရာကြီးသည် သူ မလုပ်နိုင်သေးသော ၊ နောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သော အကြောင်းအရာများ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ကို ကျွန်မတို့ကို ပြောပြတတ်သည် ။ စာရေးဆရာများကို ဖိတ်ကြား၍ စာပေဟောပြောပွဲများလုပ်ခြင်ကြောင်း ၊ ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားရည်လုပွဲများ၊ နံရံကပ်စာစောင်များထုတ်ဝေရေး ၊ စသည်စသည့် ယခု သူအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ခွင့်မရ၊ မလုပ်နိုင်သေးသော်လည်း တစ်ချိန်ချိန် မှာ အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောပြရှာသည်။
အကြီးတွေက ပဲ ရှေ့တန်းနေရာမှာ နေရာယူနေကြသည့် ပညာရေးစနစ်အတွင်းမှာ သူတပည့်တွေကို ခြေချုပ် လက်ချုပ် မဖြစ်စေလို ။ ရှေ့ထွက်စေလိုသည်။ အားလုံး ပါဝင် စေလိုသည် ။ ဒိကျောင်းမှာနေ …သည် ပညာဘဲ ရမယ် မဖြစ်စေလို ပေ ။ အမြင်ကျယ်စေလိုသည်။ သူ့တပည့်များကို ဘက်စုံစေလိုသည့် ဆရာ ။ တက္ကသိုလ်ဝင်းကြီးထဲ ရောက်သည်နှင့် ခြေထောက် ပြတ်သည့် ဘ၀-မျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ခြေထောက်ပြန်တပ်ပေးလိုသည့် ဆရာ…ကျွန်မတို့ အားလုံး ချစ်သောဆရာ …ယခု သူမရှိတော့လေပြီ ။
သေမင်းရယ် သင်း အကောင်းကြိုက်လွန်းလှတယ.် ။
ငါတို့ချစ်တဲ့ဆရာကြီးကို ငါတို့နဲ့ ဝေးရာကို ခေါ်သွားပေမဲ့ ငါတို့ တစ်နေ့မှ မမေ့ ။
ဆရာမရှိတော့တာ ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်မတို့ရင်ဘက်ထဲမှာ ဆရာဟာ အမြဲရှိနေဆဲပါ။ ဆရာမသေပါ ။
ဆရာ့ခြေကို နင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အာမ (ရဲရဲ) မခံဝံ့ ပေမဲ့ ဆရာ့ခြေလှမ်းတွေကိုအတုယူနိုင်သမျှယူပြိး နောင်လာမဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကို ကျွန်မတို့ ရခဲ့တဲ့ဘ၀ထက် ပိုမို မြင့်မားတဲ့ ဘ၀-ကို ရစေဖို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ဆရာ….။ ဆရာသည် ကျွန်မတို့ဘ၀တွေ ရဲ့ ဓူဝံကြယ် ပါဆရာ ။
Posted in ရသ
« ငယ်ချစ် နဲ့ ခဏတာ
My diary at Moscow
ငယ်ချစ် နဲ့ ခဏတာ
လစဉ်ရေးတဲ့စာ Select Month January 2011 (3) December 2010 (1) November 2010 (5) October 2010 (3) September 2010 (23)
My diary at Moscow ကဗျာ ကျွန်တော့်ဘ၀ အမှတ်တရများ ရသ အတွေးစု